I-Edmonston Lodge entle ibekwe kumhlaba wemithi ye-Edmonston House kwaye inika indawo entle yokuhlala, enendawo entle kunye nokuninzi onokuthi ujonge kufutshane. . Umgagangatho osezantsi:
Konke kumgangatho ophantsi.
Igumbi lokuhlala: Ngesitshisi seenkuni kunye ne-Smart TV.
Ikhitshi / indawo yokutyela / igumbi lelanga: Nesipheki sombane, irayburn, ifriji / isikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya kunye nomatshini wokuhlamba.
Igumbi lokulala 1: Ngebhedi enkulu ekhokelela kwi ...
Igumbi lokulala 2: Neebhedi ezingamawele kunye negumbi leen-suite elimanzi elineshawa kunye nendlu yangasese.
Igumbi lokulala 3: Ngebhedi ephindwe kabini.
Igumbi lokuhlambela: Ngeshawari phezu kwebhafu, indlu yangasese kunye nomzila wetawuli oshushu. Izigodo zokuqala zokutshisa iinkuni zibandakanyiwe. Ibhedi yohambo kunye nesitulo esiphezulu siyafumaneka xa uceliwe. . Igadi ebiyelweyo enefenitshala yegadi. Imihlaba yeehektare ezingama-25 (kwabelwana ngayo nabanini). Ivenkile yebhayisekile. Indawo yokupaka yabucala yeemoto ezi-3. Akutshaywa. Nceda uqaphele: Ipropathi inamanzi endalo avela emthonjeni. Ibekwe kumda weehektare ezingama-25 zemihlaba ethandekayo yemithi yase-Edmonston House, ikhaya lomninimzi, le ndlu ibanzi inendawo eninzi yokuhlala kunye noyilo oluncinci. Igumbi lokuhlala elipholileyo, elinesitshisi seenkuni kunye neesofa ezitofotofo, zikhokelela ekhitshini emva koko kwigumbi lokutyela, emva koko kwigumbi lelanga. Igumbi lokulala elinamawele elinegumbi elimanzi lifikeleleka kwigumbi lokulala likakumkani, ngelixa igumbi lesithathu likwelinye icala lendlu efikelelekayo ekhitshini.
Kukho ukuhamba kwezinja ezonwabileyo ukusuka emnyango ojikeleze i-Edmonston echibini kunye neendlela ezininzi zokuhamba iinduli kunye nokuhamba ngebhayisekile kufutshane neBiggar. Qhuba ngasentshona kangangemizuzu engama-30 kwaye uya kufika kwindawo yeLifa leMveli yeHlabathi eNew Lanark, ilali yenkulungwane ye-18 esekwe yiFalls yaseClyde egqumayo, ngelixa imizuzu engama-30 ukuya empuma yidolophu entle yasePeebles ebekwe kumlambo othandekayo. Tweed. Zama iindlela zebhayisekile yasezintabeni kunye neGo Ape eGlentress, umgama oziikhilomitha ezi-6 ukuya phambili, kwindawo ekufutshane kukho imbali yeTraquair House kunye neDawyck Gardens. IBiggar inoluhlu lwee-pubs, iindawo zokutyela kunye neevenkile zekofu kunye nababoneleli bokutya basekhaya abakhulu. Idlelo lamahashe lifumaneka ngolungiselelo oluthe ngqo nabanini. Ivenkile, i-pub kunye nevenkile yokutyela iimayile ezi-4.
Izimvo eziyi-1 304
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Biggar